काठ्माडौं, सोनिका रोकाया सबै माझ परिचित नाम नै हो । हालसालै समाजिक सञ्जालमा पुर्व यूवराज पारस शाह संगको टिकटक र उसगको भिडियोको कारण समाजिक सञ्जाल तातेको थियो । कतिले पारसलाई गालि गर्दै भनेका थिए “हीमानी जस्ती श्रीमती हुदा हुदै अन्य केटिसंग लाग्ने” भनेर त कतिले सोनिकालाई गालि गरेका थिए “पारसको घर बि’गारिन” भनेर ।
“अहिले आएर प्रयास्चित गर्दैछु मैले देशको सम्मान ईज्जत पहिचानलाई चिनाउन हैन मेटाउन तर्फ बढेको कदमलाई आज म स्वीकार्छु र धिक्कार्छु” भन्दै “हे नेपाल आमा मैले नबुझेर चालेको हर कदमले कतिलाई भ्र’ममा पार्यो, मलाई माफ गर्नुहोला !
उनलाई यस्ताखाले कुरामा कसैले गालि गर्दा सोनीकालाई प्रोत्साहन गरे बराबर हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय बि’बादको भुमरीमा नमज्जैले फसेपछि एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले अब सुध्रेको बताएकी छन् । उक्त भिडियोको अनुसार उनि पहिलो पटक दशैं मनाउन आफ्नो गाउँ गएको बताएकी छन् ।
उनले भाबुक हुदै भिडियोमा “अहिले आएर प्रयास्चित गर्दैछु मैले देशको सम्मान ईज्जत पहिचानलाई चिनाउन हैन मेटाउन तर्फ बढेको कदमलाई आज म स्वीकार्छु र धिक्कार्छु” भन्दै “हे नेपाल आमा मैले नबुझेर चालेको हर कदमले कतिलाई भ्र’ममा पार्यो, मलाई माफ गर्नुहोला !
म अबुझ छोरीको मेरा जन्म दिने बुवाआमा प्रति आज बल्ल लाजले शीर निहुरेको छ ! मलाई माफ गर्नुहोला मेरा बुवाआमा” भनेकी छन् ।भिडियामा नेपाल आमा मलाई माफ गर भन्दै उनले अबको दिनमा आफ्नो गाउँको र ठाउँको बारेमा केहि गर्ने सोनिका बताएकि छन् ।
सोनीकाले सार्वजनिक गरेको भिडियो हेर्दा उनलाई हेर्ने न’कारात्मक शैली सकारात्मकमा परिणत हुन्छ । भिडियोमा उनले हरेक नराम्रा कामको बारेमा सवै दर्शक, श्रोता, नेपाल आमा लगायत सबैलाई माफ समेत मागेकी छिन् ।
पछि उनी काठमाण्डै आईन र उनले त्यस्ता डबलअर्थि दिने भिडियो तथा अंतराबार्ताहरु बनाउन थालीन् । तर अब भने सुध्रिने र देश संगै आफ्नो ठाउँको लागि केहि गर्ने बताएकी छिन् ।